Messi oo kordhiyey heshiiska uu ku joogo Barcelona. | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Messi oo kordhiyey heshiiska uu ku joogo Barcelona.
Muqdisho – Barcelona ayaa xaqiijisay in Lionel Messi uu saxiixay qandaraas cusub oo uu ku sii joogi doono Camp Nou ilaa 2021.
Qandaraaska xiddiga reer Argentina ayaa la filayey inuu dhaco xagaaga soo aadan, iyada oo warar soo baxayay ay sheegayeen in laacibkan uu doonayay inuu baxo.
Barca ayaa bishii July ku dhawaaqday in Messi uu ogolaaday heshiis cusub, laakiin weeraryahanka ayaa dib u dhac ku yimid qandaraaskiisa, taasoo keentay in laga baqo inuu wada-hadal la bilaabo kooxo ajaaniib ah bisha Janaayo.
Si kastaba, wararka la isla dhex marayay ee mustaqbalka Messi ayaa haatan lasoo gabagabeeyey, iyada oo 30 jirkan uu u saxiixay Blaugrana afarta sano ee soo socota. Waxaana heshiiska uu kula jiro kooxda lagu burburin karaa £626m.
Sida lagu qoray mareegta rasmiga ah ee kooxda, Barcelona iyo Lionel Messi ayaa kala saxiixday qandaraas cusub kaasoo ku sii heyn doona xiddiga reer Argentine ee kooxda illaa xilli ciyaareedka 2020/21, heshiiska qandaraaskiisa lagu burburin karo ayaa lagu sheegay € 700m oo lacagta Yurub ah una dhiganta £626m oo lacagta Ingriiska ah. Waqtiga heshiiska cusub uu dhacayo, waxay ka dhignaan dontaa in weeraryahankan 30 jirka ah uu 17 sano ku qarash gareeyey kooxda koowaad.
Tan iyo markii uu ku biiray kooxda koobaad uuna ka soo qalin jebiyey akadeemiyadda La Masia, Messi ayaa ka caawiyay Blaugrana inay ku guuleysato siddeed horyaal oo La Liga ah, waxaana uu ku guuleystay afar jeer Champions League.
Previous: Harry Kane oo danaya in uu ciyaaro mid kasta oo kamid ah kulamda xilli ciyaareedkan.
Next: Cristiano Ronaldo oo doonaya wada-hadal uu la furo PSG.